Ikhaya / Blog / Imindeni YamaShayina, Ngempela Ayikufanele Ukuhlukaniswa Okwesithathu?
2020 / 10 / 17 UkwahlukanisaBlog 1007 0
Noma nini lapho ngikhuluma ngeJapane nabangane bami, angikwazi ukususa isihloko esisodwa: izindlu zangasese.
Amathoyilethi aseJapan, womphakathi nawasekhaya, akhanga ngendlela engachazeki, njengoba umngani wami asho, “Ngizizwa ngingcono uma ngisebenzisa indlu yangasese eJapan.
Kodwa-ke, okungihlaba umxhwele kakhulu ngezindlu zangasese zaseJapan akuyona into ehlanekezelwe nehlanzekile, kodwa indlela amathoyilethe asetshenziswa ngayo.
AbaseJapane bathanda ukugeza, ngakho-ke noma ngabe indlu yokugezela inkulu kangakanani noma incane kangakanani, ubhavu ujwayelekile kuwo wonke amakhaya.
Sethule ukwahlukana okuthathu phambilini, futhi isizathu sokuthi siphinde sisho ukwehlukaniswa okuthathu namhlanje kungenxa yokuthi sithole ukuthi kunabantu abaningi abangaqondi lokho ukwahlukana okuthathu, futhi bamane nje balandela umkhuba ngenxa yokwehlukaniswa okuthathu, ngaphandle kokubheka ngokucophelela ukuthi ngabe yilokho abakudingayo noma cha.
Ngakho-ke namhlanje sizoxoxa kahle kuyini ngempela ukwahlukana okuthathu, nokuthi kudingeka ukwahlukana okuthathu noma cha.
Yini Ngempela Ukuhlukaniswa Okuthathu?
Okokuqala, sidinga ukucacisa umqondo wokwehlukaniswa kathathu, akusho ukufaka umnyango wengilazi noma ikhethini leshawa endlini yokugezela noma ngabe ihlukanisiwe.
Lokhu akukhona ukwahlukaniswa okuthathu, kepha "ukwahlukana okumanzi nokomile."
Ukwahlukaniswa kwangempela okuthathu kusho ukuthi izindlu zokugezela, izindlu zangasese kanye neshawa azihlali esikhaleni somunye nomunye futhi zingasetshenziswa ngabantu abathathu ngasikhathi sinye. Ngamanye amagama, ukwahlukana okuthathu amakamelo amathathu azimele, azokwabelana ngomsebenzi wokugezela omunye komunye, azimele ngaphandle kokuphazanyiswa.
Ukwehlukaniswa kwesibili kungokwesibili okuhle kakhulu, ithoyilethi lihlukaniswe laba yizindawo ezimbili ezizimele, abantu ababili basebenzisa indlu yangasese ngasikhathi sinye.
Futhi-ke into elandelayo engcono ukufeza “ukwahlukana okumanzi nokomile”, ishawa elimanzi kakhulu elizimele, ukuya endlini yangasese ukwenza ukwahlukanisa kulayini, ukuze ukwazi ukugwema yonke indlu yokugezela yenziwe yaba manzi.
Uma kuqhathaniswa nendawo yokugezela edidiyelwe, ukwehlukaniswa okubili nokuhlukana okuthathu ingafinyelela ukuhlukaniswa kokumanzi nokomile, okuthuthukisa kakhulu ukunethezeka kokusebenzisa indlu yangasese.
Uma kuqhathaniswa nokwehlukaniswa okubili, ishawa yokuhlukaniswa kathathu izimele ngokuphelele, ukwahlukaniswa kokumanzi nokomile ukufeza ngokuphelele, futhi ngasikhathi sinye kunganciphisa kangcono umndeni ekusetshenzisweni kokuphikisana nokucindezela, kuthuthukise kakhulu ukusebenza kahle kwendlu yangasese.
Cabanga ngomndeni wabathathu. Ebusuku, ngenkathi umama egeza, ubaba angaya endlini yangasese futhi izingane zingageza ngasikhathi sinye. Uma inani labantu likhulu, linezizukulwane ezintathu endlini eyodwa, izinzuzo zokwehlukana kathathu zisobala kakhulu.
Ingabe Yilokho Kuphela Okulusizo Lokuhlukaniswa Kwezizukulwane Ezintathu?
Cha, akunjalo, futhi ukuphuma ngaphandle komongo kuyabukeka. Izinzuzo zokwehlukaniswa okuthathu ziningi (ngaphandle kwalokho bezingeke zithandwe), kepha njengokungenisa, zinganiselwa.
Iphuzu elibaluleke kunazo zonke ukuthi ukuthi akusona nje isidingo sayo yonke imindeni yamaShayina.
Esinye sezizathu esenza imindeni yaseJapan ifune ukwehlukanisa laba abathathu ukuthi emiqondweni yabo, ukugeza nokuya endlini yangasese akuvunyelwe ukuba ndawonye, ​​enye indawo "yokuhlanzeka" kanti enye indawo "yendle" .
Akwamukelekile ngokwengqondo uma igumbi lokugezela lingahlukile, kepha akunzima kangako ngathi ukwamukela.
Ngemuva kwakho konke, into ebesithandwa kakhulu ebesinayo ucezu olulodwa
Ngakho-ke, isimo sethu sengqondo ngokuhlukaniswa kathathu kufanele kungathathwa njengokubonwa ngokwengqondo, kodwa kusuka kokusebenzisekayo.
Ngekhaya elidinga ukwehlukaniswa kathathu, okokuqala abantu abahlala ekhaya kufanele okungenani babe 3 noma ngaphezulu, ngaphandle kwalokho asikho isidingo.
Okwesibili, ikhaya linendawo yokugezela eyodwa kuphela. Uma umndeni unezindlu zangasese ezimbili, inqobo nje uma zombili zihlukene, nazo zingakwazi ukuhlangabezana nokusetshenziswa kwansuku zonke kwazo.
Into yokugcina okufanele uyicabangele ukuthi ngabe amalungu omndeni ajwayele ukugeza. Ukugeza kuzothatha isikhathi eside kuneshawa, futhi kubhavu osesikhaleni esingasetshenziswa ngumuntu oyedwa kuphela. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi uhlukanise ubhavu ukuze umndeni omkhulu uthathe ibhavu yokuzilibazisa, okuyisizathu esenza abantu baseJapan bathande ukugeza.
Ngaphezu kweqiniso lokuthi ukusebenziseka kuyehluka komunye umndeni kuya komunye, kunobunye ubunzima emindenini yaseChina: kunzima ukubona ukwahlukana okuthathu.
Isizathu ukuthi ubukhulu nokuma kwendlu kudinga kakhulu.
Ukuze kuzuzwe ukwahlukaniswa okuthathu, igumbi lokugezela akumele libe lincane kakhulu, futhi izidingo zosayizi wendlu ziphakeme kakhulu.
Izimo ezivamile zezindlu zangasese yilezi: umugqa oqondile, umugqa ovundlile nesikwele.
Yindlu yokugezela ende ende enamathuba amaningi okufeza ukwahlukana okuthathu, isikhala sihlukaniswe kahle, vele ungeze ukwahlukanisa.
The isikwele indlu yangasese, ngakolunye uhlangothi, izodinga indawo okungenani engama-4.6 square metres, ngokusho kwesilinganiso sikaNksz Walkie.
Umthombo: isitsha sasekhaya somphakathi
Uma ufuna ukuyisebenzisa kahle, indawo kufanele ibe cishe ngamamitha-skwele ayisithupha.
Isitayela esijwayelekile sokuhlukanisa izikwele
Ngokuqondene nethoyilethi elincane …… mancane amathuba okuthi likwazi ukufeza lokhu, ngoba ukufika endaweni yangaphakathi eshaweni, umuntu kuzodingeka angene endlini yangasese (umugqa onamandla kuzofanela ube ③ → ② → ①). Uma lokhu kuzotholakala, udonga luzodinga ukususwa.
Ukwehlukaniswa kathathu noma ukwehlukaniswa okubili
Okucacayo ukuthi ucezu olulodwa luyisidingo, ngakho-ke ukukhetha esibhekene nakho kufanele noma ngabe kufanele kube nokuhlukaniswa okuthathu noma ukwahlukaniswa kabili.
Manje imodi yokwehlukanisa kathathu endlini yokugezela ishisa kakhulu, futhi nami ngokwami ​​ngingummeli wokwehlukaniswa kathathu, ngoba kokubili induduzo nokusebenza kahle kokusetshenziswa kunezinzuzo zazo ezisobala.
Kepha i-orange izalelwa eHuainan iwolintshi, izalwa eHuabei yiHovenia, ekugcineni noma ngabe kuyahlukaniswa kathathu, noma ukubona ukuthi ngeke yini ekugcineni ngokwezimo zasendaweni, futhi ithuthukise ngempela injabulo yenkomba yazo yokuphila.
Isibonelo, muva nje, uzakwethu omatasa nokuhlobisa uthole imidwebo emibili yokuklama, ukwakheka kwendlu yokugezela kunamabili ahlukene futhi amathathu ahlukene ngokulandelana.
Ake sibheke ukwahlukana okuthathu kuqala:
Uhlelo lokwehlukanisa ezintathu
Isakhiwo sokuhlukaniswa kathathu sisohlangothini lwesikwele, kepha indlu yokugezela yoqobo ingaphansi, ngakho-ke kufanele uboleke isikhala esincane egumbini eliseduze.
Isikimu sokuqanjwa kokuhlukaniswa okubili
Idizayini ehlukene kabili ukwakheka okuvame kakhulu, nosinki uyazimela. Le miklamo emibili ayiyinhle ngokuphelele noma imibi, futhi yomibili ifanele ngokusetshenziswa kwesikhala.
Kodwa-ke, uzakwethu wagcina ekhethe ukuhlukaniswa kwesibili ngoba wayehlela ukwenza igumbi eliseduze nendlu yangasese libe yisifundo futhi wayengafuni ukuphuma nendawo yokufunda kube yindlu yokugezela. Futhi le ndlu imvamisa umuntu ehlala yedwa, akudingeki ukuthi ahlukane kathathu.
Ukuhlukaniswa kwezindlela ezintathu kunezinzuzo zako futhi kulula kakhulu kunokwehlukaniswa kwezindlela ezimbili komndeni omkhulu. Kodwa-ke, ukwahlukaniswa kwesibili kudinga isikhala esincane futhi kufaneleke kakhulu imindeni emincane.
Ukukhetha phakathi kokuhlukaniswa kathathu noma ukwahlukana okubili kufanele kususelwe ezidingweni zakho ezingokoqobo, kunokuphishekela lokho okuthiwa imfashini.
Umngani owafunda eJapan waqasha ifulethi elingamamitha-skwele angama-38 eyedwa, enebhafu yokugezela ende ehlukaniswe kathathu, usinki phakathi, ishawa + ubhavu ngakwesobunxele, nendlu yangasese ngakwesokudla.
Njengoba zontathu lezi zindawo zigcwele kakhulu, ujwayele ukuvula umnyango wendlu yangasese bese eyixhumanisa nosinki, ojika ube yingxenye yesibili.
Kodwa-ke, esinye isihlobo esisanda kungena endlini entsha muva nje, njengomndeni wabantu abahlanu, sikhombise umklami ngaphambi kokulungiswa ukuthi udinga indlu yokugezela ehlukaniswe kathathu.
Kodwa-ke, indawo yangasese yokuqala yayingamamitha-skwele ama-4 kuphela, ngakho-ke ngaboleka amamitha-skwele ama-2 egumbini lokulala eliseduze ukunweba indawo yangasese.
Lapho umkhwekazi wami egeza ingane yakhe endlini yangasese ebusuku, umyeni wami uya endlini yangasese, futhi ngiyakwazi ukulala ngqo ngemva kokugeza, ngakho akudingeki ngilinde omunye nomunye. Yize igumbi lokulala selinciphe kancane, angizisoli nakancane.
Ngalezi zibonelo ezimbili, ukukubonisa ukuthi impendulo eyiyo noma engalungile kuyo ukukhetha ukwahlukanisa kathathu noma ukwahlukanisa okubili kwaziwa nguwe kuphela.
Yize sihlala sibhekene nezinqumo eziningi futhi kufanele senze ukuhweba okuningi ngenqubo yokuhlobisa ikhaya lethu, inqobo nje uma sicabanga ngemikhuba yethu futhi sizibuze ukuthi siyayidinga ngempela yini, uma siqala kusuka izidingo zangempela, noma singeke sikwazi ukulandela ukuphelela, okungenani asikwazi ukuzisola.
Isithombe sihlonishwa nge-pinterest
Edlule :: The Best Bathroom Tips Ever, All In One endaweni! Olandelayo: Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esivuzayo? Kubuthuntu? Ingabe Amanzi Ahamba kancane? Izandla Zokuthi Ungayilungisa Kanjani